किन प्रदीपले गरेनन् ‘अर्जुन रेड्डी’ को नेपाली रिमेक ? - Chautari Post Online
किन प्रदीपले गरेनन् ‘अर्जुन रेड्डी’ को नेपाली रिमेक ?
विदेशी फिल्मको कथा र प्लट चोरचार गरेर नेपालमा थुप्रै फिल्म बनेका छन् । तर, आजसम्म आधिकारिक रुपमा कपी राइट्स अर्थात् रिमेक अधिकार लिएर नेपाली फिल्म बनेका छैनन् । यसको प्रमुख कारण भनेको कुनै सुपरहिट विदेशी फिल्मको कपी राइट्स लिन निकै महँगो रकम तिर्नु पर्ने हुन्छ, जुन रकममा एउटा स्तरिय नेपाली फिल्म निर्माण हुन्छ । त्यसैले आजसम्म नेपाली निर्माताले विदेशी फिल्मको रिमेक अधिकार लिएर फिल्म बनाउने जोखिम उठाउन सकेका छैनन् ।
बलिउडमा भने पछिल्लो केही वर्षयता थुप्रै तेलूगु फिल्मको हिन्दी रिमेक बनेका छन् । तात्तातो उदाहरण अभिनेता शाहिद कपूर स्टारर फिल्म ‘कबीर सिंह’ हो । यो तेलुगू फिल्म ‘अर्जुन रेड्डी’ को हिन्दी रिमेक हो । दुबै फिल्मका निर्माता र निर्देशक सन्दिप भांगा हुन् । यो फिल्मले भारतमा करीब साढे २ सय करोडको व्यापार गरिसकेको छ । नेपालमा पनि फिल्मले जबरजस्त व्यापार गरिरहेको छ । फिल्मको कथावस्तुलाई दर्शकले निकै रुचाएका छन् ।
केही दिनदेखि ‘अर्जुन रेड्डी’ को नेपाली रिमेक बन्न लागेको चर्चाले फिल्मवृत राम्रैसँग तातेको छ । रिमेक अधिकार लिने कम्पनी र क्याप्टेनसिप सम्हाल्ने निर्देशकको नाम सार्वजनिक नभएपनि फिल्ममा युवा ज्योतिष हरिहर अधिकारीले प्रमुख भूमिका निभाउन लागेको चर्चा छ । यो कुरा उनी स्वयं स्वीकार गर्छन् । एक अन्तर्वार्तामा उनले ‘अर्जुन रेड्डी’ को नेपालका लागि रिमेक अधिकार खरिद गर्न निर्माता भारत गएको र आफू जिममा पसिना बगाइरहेको बताएका छन् ।
तर, फिल्मीखबर डटकमलाई प्राप्त जानकारी अनुसार, ‘अर्जुन रेड्डी’ को नेपाली रिमेकको अधिकार विशाल सापकोटा (निर्देशक अमरदीप सापकोटाका भाई) ले गएको डेढ वर्ष अगाडि नै लिइसकेका छन् । फिल्म निर्माण कम्पनी भद्रकाली पिक्चरका मालिक प्रणय रेड्डी भांगा र विशाल दुबै मिल्ने साथी हुन् । अमेरिकामा फिल्म सम्बन्धि अध्ययन गर्दैगर्दा उनीहरुको दोस्ती भएको थियो । प्रणय र विशालबीच ‘अर्जुन रेड्डी’ को नेपाली रिमेकका लागि मौखिम सहमती भइसकेको छ ।
यद्यपि, अहिलेसम्म दुईबीच कागजी सम्झौता भने नभएको स्रोत बताउँछ । प्रणय र विशालबीच हिन्दी रिमेक रिलिजभन्दा अगाडि नै नेपाली भर्सन रिलिज गर्ने सहमती भएको थियो । दुईबीच १० लाखमा फिल्मको कपी राइट्स लिने/दिने पनि फाइनल भएकोे थियो । नेपाली रिमेकका लागि विशालले फिल्मको स्क्रिप्ट पनि तयार पारे । आफैंले निर्देशन गर्ने गरि उनी निर्माता खोज्दै सुवास गिरीसँग ठोकिए । सुवाससँग विशाललाई भेट गराउन निर्देशक दिनेश राउतले मध्यस्थकर्ताको भूमिका खेलेका थिए ।
‘नोभेम्बर रेन’, ‘क्लासिक’, ‘कृ’ जस्ता फिल्म निर्माण गरिसकेका सुवास ‘अर्जुन रेड्डी’ हेरेपछि नेपाल रिमेक अधिकार खरिद गर्न तयार भए । उनले लिड हिरोमा प्रदीप खड्काको नाम सिफारिस गरे । यसमा विशाल सापकोटाले आपत्ति जनाएनन् । सुवासको आग्रहमा प्रदीपले ‘अर्जुन रेड्डी’ हेरे । उनी पनि फिल्म गर्न राजी भए । निर्माण टिमले दाह्री, कपाल र केही वजन बढाउनु पर्ने सर्त राख्यो । प्रदीप यो मान्न पनि तयार भए । तर, यो फिल्म अहिलेसम्म बन्न सकेको छैन ।
‘अर्जुन रेड्डी’ को नेपाल अधिकार खरिद गर्न तयार भएका निर्माता सुवास गिरी नेपाली भर्सनभन्दा अगाडि हिन्दी रिमेक निर्माण र प्रदर्शन हुने भएपछि आफूले हात झिकेको बताएका छन् । फिल्मीखबरसँँग कुराकानी गर्दै उनले भने, ‘मकहाँ विशाल सापकोटाले यो प्रस्ताव लिएर आउनु भएको थियो । ‘अर्जुन रेड्डी’ हेरेपछि म नेपाली रिमेक बनाउन तयार भएको थिएँ । लिड हिरोको रुपमा प्रदीप खड्कासँग कुरा भएको पनि हो । उहाँ गर्न राजी पनि हुनुभएको थियो ।’
‘अर्जुन रेड्डी’ को नेपाली रिमेकबाट हात झिक्नुको कारणबारे प्रस्ट्याउँदै उनी अगाडि भन्छन्, ‘हामीलाई यस वर्षको जलाईभन्दा अगाडि नै फिल्म रिलिज गर्न भनिएको थियो । किनकि, ‘अर्जुन रेड्डी’ बलिउडमा पनि बन्दै थियो । तर, हामीभन्दा अगाडि नै बलिउड फिल्म बन्ने र रिलिज हुने भयो । नेपालमा बलिउड फिल्मको ठूलो प्रभाव छ । त्यसैले ‘अर्जुन रेड्डी’ को हिन्दी भर्सन रिलिज भएपछि नेपाली रिमेक बनाउनुको कुनै औचित्य रहँदैन भन्ने लागेर मैले हात झिकेँँ ।’
यो फिल्मभन्दा अगाडि सुवासले फिल्म ‘भैरवी’ मा अभिनेता प्रदीपलाई अनुबन्ध गरेका थिए । निर्देशन दिनेश राउतले गर्ने फाइनल भएको थियो । तर, यो फिल्म घोषणा भएको २ वर्ष वितिसक्दा पनि निर्माण हुन सकेको छैन । केही समय अगाडि फिल्मबाट प्रदीप बाहिरिएको चर्चा पनि चलेको थियो । हाल अष्ट्रेलियामा रहेका अभिनेता प्रदीपले ‘भैरवी’ को सट्टामा आफूलाई निर्माता सुवास गिरीले ‘अर्जुन रेड्डी’ को नेपाली रिमेकको प्रस्ताव गरेको बताए ।
फिल्मीखबरसँग कुरा गर्दै उनले भने, ‘सुवास दाईले ‘अर्जुन रेड्डी’ को नेपाली रिमेकबाट अफर गरेपछि मैले फिल्म हेरेँ । फिल्म राम्रो लाग्यो । अझै पनि मेरो ल्यापटपमा त्यो फिल्म छ । तर, फिल्ममा किसिङ सिन धेरै भएका कारण मलाई गर्न मन लागेन । सुवास दाईले तिमीले नगर्ने भए फिल्म नै बल्दैन भन्नुभएको थियो । पछि मैले नगर्ने निर्णय लिएँ ।’ प्रदीपले आफूले गर्न राजी भए निर्देशक विशाल सापकोटाले किसिङ सिन हटाउन तयार भएको पनि बताए । तर, फिल्मको मर्म मर्ने ठानेर आफूले गर्न नमानेको उनको भनाई छ ।
‘त्यो क्यारेक्टरको नेचर नै त्यस्तै हो । किसिङ सिनहरु हटायो भने फिल्मको मर्म मर्थ्यो । त्यसलाई हटायो भने फिल्म विग्रन्छ भनेर सहमतीमा नै मैले नगर्ने निर्णय लिएँ’, उनले भने । उनी फिल्म छाडेकोमा आफूलाई कुनै ‘रिग्रेट’ नभएको बताउँछन् । प्रदीपले नगर्ने भएपछि ‘अर्जुन रेड्डी’ को नेपाली रिमेकबाट निर्देशक बन्न लागेका विशालले अभिनेता आर्यन सिग्देललाई लिने सोच बनाएका थिए । आर्यनसँग यो फिल्मको बारेमा छलफल भएको छ वा छैन ? यसको भने जानकारी प्राप्त छैन । केही दिनयता ‘अर्जुन रेड्डी’ को नेपाली रिमेकमा हरिहरको नाम चर्चामा छ ।
गोप्य स्रोतले फिल्मीखबरलाई दिएको जानकारी अनुसार, उक्त तेलुगू फिल्मको एक नेपाली कम्पनीले कपी राइट्स (हरिहरले अभिनय गर्ने भनिएको फिल्म) लिएको जानकारी पाएपछि विशालले ‘अर्जुन रेड्डी’ का निर्माता प्रणयसँग फोनमा कुराकानी गरेका थिए । प्रणयले उनलाई कुनै नेपाली कम्पनीलाई फिल्मको रिमेक अधिकार विक्री नगरेको जानकारी दिएका छन् । यसको मतलब, ‘अर्जुन रेड्डी’ को नेपाली रिमेकको अधिकार अझै विशालको हातमा छ । उनी चाँडै उक्त फिल्मको नेपाली भर्सन निर्माण गर्ने तयारीमा छन् । flimikhabar/from
Prevआफ्नै श्रीमानबाट असुरक्षित भएको भन्दै गुहार माग्न प्रहरीकहाँ पुगिन शिल्पा पोखरेल
Nextकान्तिपुर फिल्म एकेडेमीको दिक्षान्तमा ७ फिल्म प्रदर्शन